Nhau - Kaihua Mould's 2021 "Dhijitari Management Kuvandudza" Musangano Wekusimudzira uye "Strategic Target Mauto Mauto" Oath Musangano wakaitwa zvakanaka
Kaihua Mould's 2021 "Dhijitari Management Kuvandudza" Musangano Wekusimudzira uye "Strategic Target Yemauto Order" Oath Musangano wakaitirwa zvakanaka
Musi waMarch 2-3, 2021, Kaihua Mould "Dhijitari Management Kuvandudza" Musangano Wekusimudzira uye musangano we "Strategic Target Mauto Ehurongwa" wakaitirwa muHuangyan Headquarters neSanmen Factory. Vashandi vanodarika chiuru vakapinda musangano uyu.
"Dhijitari Management Kuvandudza" Musangano Wekusimudzira
Pakutanga kwemusangano, Sachigaro Liang Zhenghua akagovana newe:
Muna 2020, madhipatimendi akasiyana siyana emafekitori maviri ari muHuangyan Sanmen achatarisa pfungwa dzinotungamira dze "mhando yepamusoro, kushanda zvakanaka, uye kutenderera kushoma", inozoshanda muchirongwa chimwe nechimwe chakabudirira, uye ichapenya nemubairo wekuremekedzwa.
Mirairo muna 2020 yakawedzera ne40.37% gore-ne-gore
2020 goho kukosha kwakakwira ne13,77% gore-ne-gore
Iyo yakazara ye668 KMS yekuvandudza kesi
Iyo yakazara ye1184 KMVE yekuvandudza kesi
2021 igore raKaihua rekuvandudza kwedhijitari. Madhipatimendi ese anofanirwa kutarisa kusimudzira kwemhando yepamusoro, zvinonzwisisika kuvandudza manejimendi manejimendi, uye kupedzisa zviratidzo zve2021, uye kuzadzisa zvinotevera zvishanu zvinodiwa:
1. Inofanira kuomerera pahunhu kutanga
2. Inofanirwa kuve yevatengi-centric uye nekupa vatengi mhinduro dzakarongeka
3. Mari yekambani uye zvinodhura zvinofanirwa kudzikiswa
Kumisikidzwa kunofanirwa kutevedzwa
5. Izvo zvinodikanwa kuti uwedzere mwero weinformatization uye nekukurumidza kuvandudza kwe digitalization
Pamusangano uyu, kambani yakarumbidza mapato akasarudzika nevashandi vakasarudzika vakasarudzwa nemadhipatimendi akasiyana siyana muna 2020. Yakazara mibairo mishanu yemubatanidzwa uye gumi nemimwe mibairo yakapihwa, uye vashandi vanosvika makumi mashanu nevashanu vakatora nhanho yekuwana mibairo iyi.
Chikamu chechipiri chemusangano uyu kuburitswa kwemusangano wemhiko we "zvine hungwaru hwechiuto".
Mutevedzeri wemutevedzeri wekambani uye maneja wedhipatimendi rega rega vakatora mhiko ndokusaina mauto emauto rimwe nerimwe, uyezve Sachigaro Liang Zhenghua akapa mireza kubazi rega rega.
Dhiramu yehondo yarira, uye hurongwa hwemauto hwakaiswa. Iwo emauto kuraira ndicho chinangwa, asiwo vimbiso. Vashandi vese vanozorerutsa basa pamafudzi avo nekuzviita muzviito, zvekuti mazwi anofanira kunge ari zviito uye zviito zvinofanirwa kutsiga!
Kuburitsa iyo "Strategic Chinangwa Chinangwa Chemauto" Oath Musangano
Nguva yechando yapera, iro renyeredzi rakajeka
Ndatenda mhuri yeKaihua
Muna 2020, tichava muchikepe chimwe chete takabatana maoko
Tichaenderera mberi muna 2021
Usakanganwa chinangwa chekutanga uye fambira mberi wakashinga